March 5, 2020 Zayar Phyo Han Global News 0
လိုငျယှနျကို ၅-၁ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ မနညေ့ပွငျသဈဖလားဆီမီးဖိုငျနယျပှဲတုနျးက ပီအကျဈဂြီတိုကျစဈမှုးအမျဘကျပီဟာ ဟကျထရဈသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး အဲဒီထဲမှာ ဒီရာသီအကောငျးဆုံးဂိုးတှထေဲက တဈဂိုးအဖွဈ သတျမှတျလို့ရနိုငျတဲ့ သှငျးဂိုးတဈဂိုးလညျး ပါဝငျနပေါတယျ။ မကျဆီနဲ့စီရျောနယျဒိုတို့ ကစားသမားဘဝအနားယူသှားရငျ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဖွဈလာမယျ့သူလို့ အမျဘကျပီဟာ မြားစှာထငျကွေးပေးထားခွငျးခံရသူပါ။ အသကျအရှယျနဲ့မလိုကျအောငျလညျး သူဟာ အောငျမွငျမှုမြားစှာရရှိထားတာပါ။
ပွေးနှုနျး၊ စကေးပိုငျး ဘာမှပွောစရာမရှိသူဖွဈလို့ လိုငျယှနျနဲ့ပှဲက သူ့ရဲ့တဈကိုယျတျောသှငျးဂိုးဟာ သူလုပျနကေအြတိုငျးပဲလုိ့တောငျ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပွနျရဈကွညျ့ခငျြတဲ့သှငျးဂိုးတှထေဲမှာတော့ ပါဝငျသှားပါတယျ။ ဟကျထရဈသှငျးနိုငျတဲ့ပှဲက သူ့ရဲ့အဲဒီဒုတိယမွောကျဂိုးကို တဈကိုယျတျောဆငျနှဲတဲ့တနျပွနျတိုကျစဈကနေ မိနဈ ၇၀ အရောကျမှာ သှငျးယူခဲ့တာပါ။ သူဟာ ကိုယျ့ကှငျးဘကျခွမျးရဲ့တဈဝကျလောကျမှာ ဘောလုံးရရှိသှားပွီး အဲဒီမှာ ပွိုငျဘကျတဈယောကျကို အရှိနျနှုနျးနဲ့ ဖွတျကြျောပွေးသှားကာ တဈဖကျပငျနယျတီဧရိယာထဲအရောကျမှာလညျး နောကျထပျပွိုငျဘကျတဈယောကျကို ကနျမလိုနဲ့ ခွယေောငျပွဆှဲယူကနျသှငျးသှားခဲ့တာပါ။
Mbappe is silly. He’s gotajet pack on ffs. https://t.co/WP7haLS8Kg
အဲဒီပှဲက ဟကျထရဈကွောငျ့လညျး အမျဘကျပီဟာ အခုဆိုရငျ ဒီရာသီ ပီအကျဈဂြီအတှကျ ပွိုငျပှဲအရပျရပျ ဂို ၃၀ ရှိသှားပါပွီ။ နှဈရာသီဆကျတိုကျ ဂိုး ၃၀ နဲ့အထကျ သှငျးနိုငျခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကလညျး သူဟာ ပီအကျဈဂြီအတှကျ ပွိုငျပှဲအရပျရပျ ၃၉ ဂိုးသှငျးယူပေးခဲ့ပါတယျ။
Jet တပ်ထားသလိုပြေးနှုန်းနဲ့ လိုင်ယွန်နဲ့ပွဲက အမ်ဘက်ပီရဲ့အံ့မခန်းတစ်ကိုယ်တော်သွင်းဂိုး
လိုင်ယွန်ကို ၅-၁ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ မနေ့ညပြင်သစ်ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲတုန်းက ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှုးအမ်ဘက်ပီဟာ ဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ ဒီရာသီအကောင်းဆုံးဂိုးတွေထဲက တစ်ဂိုးအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရနိုင်တဲ့ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ မက်ဆီနဲ့စီရော်နယ်ဒိုတို့ ကစားသမားဘ၀အနားယူသွားရင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ့်သူလို့ အမ်ဘက်ပီဟာ များစွာထင်ကြေးပေးထားခြင်းခံရသူပါ။ အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လည်း သူဟာ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားတာပါ။
ပြေးနှုန်း၊ စကေးပိုင်း ဘာမှပြောစရာမရှိသူဖြစ်လို့ လိုင်ယွန်နဲ့ပွဲက သူ့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်သွင်းဂိုးဟာ သူလုပ်နေကျအတိုင်းပဲလုိ့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ရစ်ကြည့်ချင်တဲ့သွင်းဂိုးတွေထဲမှာတော့ ပါဝင်သွားပါတယ်။ ဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်တဲ့ပွဲက သူ့ရဲ့အဲဒီဒုတိယမြောက်ဂိုးကို တစ်ကိုယ်တော်ဆင်နွှဲတဲ့တန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေ မိနစ် ၇၀ အရောက်မှာ သွင်းယူခဲ့တာပါ။ သူဟာ ကိုယ့်ကွင်းဘက်ခြမ်းရဲ့တစ်ဝက်လောက်မှာ ဘောလုံးရရှိသွားပြီး အဲဒီမှာ ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကို အရှိန်နှုန်းနဲ့ ဖြတ်ကျော်ပြေးသွားကာ တစ်ဖက်ပင်နယ်တီဧရိယာထဲအရောက်မှာလည်း နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကို ကန်မလိုနဲ့ ခြေယောင်ပြဆွဲယူကန်သွင်းသွားခဲ့တာပါ။
အဲဒီပွဲက ဟက်ထရစ်ကြောင့်လည်း အမ်ဘက်ပီဟာ အခုဆိုရင် ဒီရာသီ ပီအက်စ်ဂျီအတွက် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် ဂို ၃၀ ရှိသွားပါပြီ။ နှစ်ရာသီဆက်တိုက် ဂိုး ၃၀ နဲ့အထက် သွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်း သူဟာ ပီအက်စ်ဂျီအတွက် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် ၃၉ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ရှနျနီဟာ အနာဂါတျရဲ့မနျယူနညျးပွတဈယောကျလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ဆိုးလျရှား